Diyaar ma u tahay inaad heeso Ogow Erayada ugu Fiican ee Instagram ee Heesaha ➡️ ➡️ Kuwa raaca ▷ ➡️
January 16, 2019 0 comments 1293
Muusiggu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan adduunka, waa luuqad guud Taasi waxay gaari kartaa geeskasta oo adduunka ah. Tan waxaad ku muujin kartaa shucuur badan, khibrado dhab ah iyo khiyaali ah kuwaas oo ku dhamaan doona inaad siiso farriin si toos ah u gaadha wadnaha. Waxay sidoo kale fiicnaan laheyd isticmaal xashiishka.
Taasi waa sababta aan sida caadiga ah u arki karno inta heesahaas iyadoon loo eegayn hiddaha ay u shaqeeyeen si ay u muujiyaan shucuur qaar, waaya-aragnimadooda iyo kuwa kale oo leh heeso qaali ah oo ku dhammaaday micno aad u badan dhagaystayaasha. Maanta waxaan kuu soo bandhigi doonaa waxbadan oo ku saabsan waxa ugu fiican Weedhaha Instagram ee heesaha.
Sidee looga helaa weedh wanaagsan heesta?
Waxaa jira heeso badan oo ereyadoodu aad u noqdeen adduunka oo dhan caanSi kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay hees aan si wanaagsan loo aqoon laakiin aad u jeceshahay wax badan, waxaad dooran kartaa qaybta ugu muhiimsan oo aad u isticmaali kartaa in lagu dhammaystiro sawirka aad ku soo daabacayso xitaa gudaha sheekooyin.
Iyada oo ku xidhan macnaha aad rabto inaad siiso daabacaada waxaad dooran kartaa jumladda heesta, waxaa jira murugo, jaceyl, farxad iyo xitaa heeso xanaaq badan. Waxa muhiimka ah waa in la helo kan ku habboon muuqaalka. Waxaad sidoo kale geli kartaa weedhan gudaheeda videos.
Erayada jacaylka jaceylka
Jacaylku waa iska caabinkeena - Muse
Ugu dambayn jacaylka aad heshaan waxay la mid tahay jacaylka aad gudbiso - Beatles The
Jacaylku waa waxa qofkasta ka hadlayo laakiin qofna runtii ma yaqaan waxa ay tahay - Alejandro Sanz
Jacayl la’aan xorriyad ayaa jirta waxa ay hindhiso - Ricardo Arjona
Jacaylku waa shay si kadis ah ugu dhaca si dabiici ah, oo dab ka buuxa, haddii xoogagga ay doonayeen oo bilowgoodu uusan dhammaan doonin - Calan la'aan
Waa sheeko jacayl sida ma jiri doonto cid kale, oo iga dhigtay inaan fahmo wanaagga iyo xumaanta oo dhan - Pedro Infante
Ma aqaano adiga, laakiin waxaan bilaabay inaan ku seego, barkimadayda kama joojiyo inaan ka fikiro adiga, dadka, saaxiibbada, waddooyinka, markhaatiyaal la'aan - Luis Miguel
Waligey sidan oo kale weligey maan dareemin, qaawan oo kugu agdhow, weligeyna maan dareemin si wanaagsan - Avril Lavigne
Weligaa ha dhihin inaan iska tegey. Weligiin waan ku jeclaan doonaa - Miley Cyrus
Markuu jacaylku sidan oo kale ku yimaaddo, qofna xitaa ma garanayo - Simon Diaz
Hal maalin uun baan halkan joogay oo waad durdurisay haddii aan baxo - Dido
Ku kasbato raac badan adiga oo adeegsanaya instafollow
Oraahda heesta Rock
Rajo wanaaggu waa gaashaankayga ugu fiican - Rod Stewart
Aroos ii dil ii soo dir arooskeyga mana iloobi doono ubax qabrigaaga - Dhagxaanta
Waxay dhacdaa marar badan waqtiga, dhamaanteen waxaan ku noolahay silsilado, xitaa ma ogi inaan haysano furaha - Gorgorka
Kulligeen mugdi ayaynu ku khasaarnaa, riyooyinku waxay bartaan inay hagaan xiddigaha - Rush
Marka caawa waxa fiican inaad joojiso oo aad dib u dhisto burburkaaga, maxaa yeelay nabadgelyada iyo aaminaadu way ku guuleysan karaan maalinta ugu dambaysa, inkasta oo khasaaraha oo dhan - Led Zeppelin.
Jeclow markii aad awoodid, ooya marka ay tahay inaad yeelato, Waan ogahay cidda ay tahay inaad ahaato, taasi waa qeyb ka mid ah qorshaha - Dan Fogelberg
Labiskaygu waa maqaar, awooddayduna waa da'dayda - KISS
Reggaeton heesta oraahda
Wali sawirro baa ku yaal, gees kasta oo guriga ku yaal. Aamusnaantu waxay aniga igu sheegeysaa, meel bannaan ayaa u badan.- Waan diiday (Reik, Ozuna iyo Wisin)
Haddii aad dareento isla sidii oo kale, waad ila joogi lahayd halkan. Waxaad ahayd saaxiibteyda aniga iyo amiirkaadaba, anigoo saaxib ahay.- Amiirkaaga (Daddy Yankee, Zion & Lennox)
Ilmo maya, waxaan kuu diidayaa inaan ku siiyo hal dhunkasho ee ugu dambeysay, ee iska ilaali, si marka xigta aan adiga kuu siiyo. - Waan diiday (Danny Ocean)
Waxaan rabaa inaan ku sii daayo dabka dusha sare iyo dhexda adag si heerkulku kor ugu kaco. - Heerkulka (Maluma iyo Eli Palacios)
Laga yaabee inaad jeceshahay qof aadan jeclayn, waxaad qaadatay go'aan dilaa ah. Way ku dhaawaceen taasina waxay kaa xumeeyeen, waa inaan bixiyaa. - (Tony Dize, Ken-Y)
Maanta waxaan toosay 'ku dhuftay wararka sheegaya inaadan soo noqon doonin. Faahfaahin ', sariirtayda ku jiifa, anigoo ka fekeraya inaad i jeceshahay.- Hoos (Rakim iyo Ken Y)
Waa awood badan yahay, kala badh fadeexad leh. Waxaa jiri doona dumar badan laakiin waxaad tahay wax kale. Hadday dambi tahay inaad quruxsan tahay, sariirtayda ayaan ku qabtaa oo gacanta ayaan ku xidhayaa. - Dura (Daddy Yankee)
Ve sida loo monetize Instagramkaaga
1 Sidee looga helaa weedh wanaagsan heesta?
1.1 Erayada jacaylka jaceylka
1.2 Oraahda heesta Rock
1.3 Reggaeton heesta oraahda